Hlala endlwini yomthi okanye umise intente
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguShirley
Yiza ulale phakathi kwemithi kwaye uchithe iintsuku zakho uzingela kunye / okanye uhamba ngaphezu kwe-130 yeehektare zomhlaba! indawo enkulu yokuzisa uyihlo ukuba azingele angagcina umlilo ngelixa uzingela uya kubona isiqinisekiso sexhama-ukusuka kwiglasi yokutyibilika ucango olukhulu. uzakubona ngaphezu kwakho jan 20/2020 ngoku esenza isiraphu ukuba ize kubona incasa
Akukho mntu ujikeleze yonke ihlathi kuphela ingxolo mhlawumbi inqwelomoya akukho ndlela okanye ndlu, kwisithuba semayile enye efihlakeleyo izilwanyana zasekhaya zamkelekile nceda ube nekhreyithi kunye neephedi zokuchama. Musa ukushiya izilwanyana zasekhaya zingajongwanga
5.0 · Izimvo eziyi-200
Jonga intlango emangalisayo kwaye undwendwele iBhulorho yeNdalo eneengxangxasi ezintle! Unokutyelela i-West Virginia Wildlife Centre, enikezela ngeehambo zokuhamba ukusuka ngoMeyi ukuya ku-Oktobha (ukuze ufumaneke ngokupheleleyo, khangela i-intanethi). Idolophu yaseBuckhannon ikwimizuzu engama-30 kuphela kwaye ibonelela ngeendawo zokutyela ezahlukeneyo kunye nokuzonwabisa! I-Weston ine-trans allegheny Lunatic asylum kunye nokhenketho 45 min kude
Nceda uzive ukhululekile ukuza kuthi nayo nayiphi na inkxalabo enokuthi ivele. Singabantu abanobuhlobo kakhulu kwaye sijonge ukukholisa! Ngomhla wama-24 kaJan ngoku ukwenza isiraphu yemaple uze kubona incasa